नेपालका टेलिभिजनहरु, रेडियोहरु, मठ मन्दिरहरुमा २०७४ साल र २०७५ सालमा सबैभन्दा बढी बजेको यो भजन ले लोकप्रियता सँगै नयाँ ईतिहास रचेको छ ! - Enepalese.com
नेपालका टेलिभिजनहरु, रेडियोहरु, मठ मन्दिरहरुमा २०७४ साल र २०७५ सालमा सबैभन्दा बढी बजेको यो भजन ले लोकप्रियता सँगै नयाँ ईतिहास रचेको छ !
इनेप्लिज २०७५ माघ २६ गते २:३० मा प्रकाशित
नेपालका टेलिभिजनहरु, रेडियोहरु, मठ मन्दिरहरुमा २०७४ साल र २०७५ सालमा सबैभन्दा बढी बजेको यो भजनले लोकप्रियता सँगै नयाँ ईतिहास रचेको छ । यस बाहेक बिभिन्न अनलाइन मिडिया, युट्युब, फेसबुक लगायतका सामाजिक संजालहरुमा पनि यो गीतले अरु भजनहरुको तुलनामा बढी दर्शक श्रोता पायो । सबै देबी देबतालाई एउटै भजनमा समेटेर गाईएको रामप्रसाद खनालको यो भजन जुनसुकै पूजा आजा देखी मठ मन्दिर, धार्मिक कार्यक्रमहरुमा मात्र होइन पशुपती आर्यघाटमा दिबँगत ब्यक्तिहरुलाई अन्तिम बिदाई गर्दा पनि बजाइने गरेको छ । सदाबहार यो भजनको तपाईं पनि आनन्द लिनुहोस । नेपाली टेलिभिजनहरु र रेडियो स्टेशनहरुकालागी यो भिडियो र अडियो प्रशारण प्रायोजनका लागि आवश्यकता अनुसार डाउनलोड वा कपी गर्न अनुमती दिइएको छ ।